सेक्सपछि किन महिलालाई पछुतो लाग्छ ?
कसैसँग यौन सम्बन्ध हुनुलाई सामान्य यौन सम्बन्ध (सेक्स) मानिन्छ । किनकि यसमा रुचिसँगसँगै सहमति पनि हुन्छ । सामान्य यौन सम्बन्धपछि प्रायः महिलाहरुमा पछूतोको भावना आउने गर्छ । यस्तो किन ? हालसालै गरिएको एउटा नयाँ अध्ययनले यदि सम्भोगको लागि महिलाले पहल गर्छिन् र त्यसको आनन्द लिन्छिन् भने उनलाई कुनै पछूतो र खेदजनक भावना नआउने तथ्य पत्ता लगाएको छ । यसअघिको अध्ययनमा एक रातको सम्बन्धमा पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुलाई ज्यादा पछूतो र नराम्रो लाग्ने बताइएको थियो । शोधकर्ताले नर्वेको एक विश्वविद्यालयमा ५ सय ४७ र अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा २ सय १६ छात्रछात्रासँग यसबारे अध्ययन गरेको थियो ।
पहिलेको अध्ययनमा पुरुषको तुलनामा सामान्य सम्भोगमा महिलालाई कम पछूतो हुने बताइएको थियो । त्यसो त यौन सम्बन्धमा महिलाहरुलाई आफ्नो मर्जी हुँदा र नहुँदाको परिस्थितिले फरक पार्ने गर्छ । यदि सम्भोगको लागि दबाबमूलक निर्णय लिइयो भने त्यसले खेदजनक र पछूतो भावना हुने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । त्यस्तै सम्भोगमा संलग्न पुरुष साथीको यौन क्षमताले पनि अर्थ राख्ने गर्छ ।